umatshini wokutya weentlanzi,abavelisi boomatshini bokutya abilayo
Amandla:22KW + 0,75KW + 1.5KW izigaba ezithathu
Umthamo:400~ 500kg / h
Itekhnoloji yokulungisa eyongezelelweyo ibaluleke kakhulu kwimveliso yokutya okusetyenziswa ngokufuthi kwezolimo lwaselwandle. Kule minyaka idlulileyo kuye kwakho ukukhula okungapheliyo ekusetyenzisweni kokutya okuthe kratya kokutya emanzini. Ukutya okuvela emanzini ngokukhupha kunokuzinza kwamanzi okuphezulu, Indawo engcono yokuhamba ngokuhamba kwamanzi kunye namandla aphezulu kuneepati zokutya, elinegalelo ekwandeni kokukhula kweentlanzi kunye nokuphuculwa kokuguqulwa kokutya. Ke ngoko kuthelekiswa nenkqubo yesiqhelo yokuntywila, Itekhnoloji eyongezelelweyo yeyona ndlela isebenzayo yokuphucula indlela esebenza ngayo emanzini.
Umkhululi kunye noMncedisi
I-extruder kunye neerander ngoomatshini bokutya kwiintlanzi ezisebenzisa ikakhulu extrusion kunye neteknoloji yokwandisa kwimveliso yokutyisa. umatshini wokutya weentlanzi sisiphendulo se-bio esibonelela ngoxinzelelo oluyimfuneko lokunyanzela ukondla imgqomgqomgqom endaweni yokufa okusisigxina. Ngotshintsho lobushushu, uxinzelelo, nicheba ngaphakathi empahleni, Izinto ezingafunekiyo zenziwa zangumqengqeleko ngaphambi kokuba zithathe indawo yecala lokuvula ukufa. Izixhobo ezongezelelweyo zenziwa ngesixhobo sokuhambisa umbane, isixhobo sokondla, imeko yangaphambili, umatshini otya ukutya okuneenqanawa kunye nokukhupha isixhobo sokusika, njl. Umgqomo we-extruder udityaniswa ziintloko ze-barrel, isikhafu auger, izithintelo zokuhamba (kuthiwa zii-shearlocks) kwaye kufa umnqamlezo.
Abandisi bayafana nabakhupheli, kodwa banomahluko kwiziphumo zonyango kunye nokusetyenziswa. Abandisi baqhele ukusetyenziswa njengemeko yokulungisa umatshini ukunyanga izinto ekunzima ukuzisebenzisa, Ukonyusa iswegestibility yeeselulose kunye nezinto zeprotein ukulungiselela ukondla ukucoceka. Izinto zokugcwala zisebenza ngemiphanda enesikere esinye okanye ezibini zokuhambisa izinto kwaye zizinyanzele ukuba zife. I-extrusion inokuthathwa njengonyango oluphezulu lwe-shear. Isenzo se-shear ngexesha lokwandisa unyango luphantsi kakhulu. Kuthelekiswa ne-extruder, ukulula kwesandisi kuvumela unyango olusebenzayo lwesixa esikhulu sokutya ngexabiso eliphantsi. umatshini wokutya odadayo afumene indima enkulu kwimveliso yentlanzi. Ngomkrelekrele, kukho iintlobo ezahlukeneyo ezikhoyo kwimarike, ezinje ngesikrelekisi esinye, amawele iskreyi extruders, umatshini wokutya omanzi, umatshini wokutya owomileyo kunye nokunye.
Uhlobo lomdaka kunye nohlobo lweWet Type Fish feed Machine
Uhlobo lomatshini omileyo wokutya iintlanzi zodidi luhlobo loomatshini abangafuneli i-boiler enomphunga ubushushu okanye isitofu sesitovu okanye ishushu shushu, kwaye konke ukufudumeza kwemveliso kwenziwa ngoomatshini bokufota abasebenza ngoomatshini. Ngaphandle kokusebenzisa umandlalo, i-extrusion eyomileyo isebenzisa amanqanaba asezantsi omswakama. Ke kufanelekile ukuba kusetyenzwe kumanzi asezantsi kunye nezinto ezinamafutha aphezulu.
Ngelixa umatshini omanzi wokudada weentaka. Ukuthintela kwangaphambili inyathelo elibaluleke kakhulu kwinkqubo emanzi yokukhupha yokususwa kwemichiza okanye emzimbeni ukuba kwenzeke. Intliziyo yomatshini wokudada weentlanzi edadayo isebenza: ukumisela kwangaphambili, ukupheka kunye nokufa ngokubumba. Ubushushu obuphezulu kunye nenkqubo yoxinzelelo oluphezulu ingabulala i-salmonellosis kunye nosuleleko lwebhaktiriya kwaye yenza ukuba i-pellets idle ngokulula..
Izibonelelo zePellet esetyisiweyo yeAca
Ukubanakho komntu owongeza into eyongezelelweyo kuphucula ukuguquguquka komenzi wokutya ukuvelisa iipellets zokutya kwentlanzi nge shrimp, unonkala, I-eel, intlanzi yekati, i-carp, amasele njl..
Izixhobo zoncedo zihamba ngokusebenza kwe-HTST, ukunyuka kwesitashi i-gelatinization ingafikelela 80-99% kwizilwanyana zasemanzini kukumba ukutya.
3.Ukugaya ukutya okungcono kunye nokungena
Iipellets zinokuqhekeza ngokukhawuleza esiswini seentlanzi ilahlekelwa zizakha-mzimba (ngexesha lokubhaliswa), enegalelo ekufunxeni ngcono izondlo.
4.Ukuphuculwa kozinzo lwamanzi
Iipellets ezihamba emanzini zixhathisa ngakumbi ukwahlukana namanzi kunye nokutya okuhamba emanzini kuvumela umlimi wentlanzi ukuba ajonge imeko yentlanzi kunye nenani lokutya okutyelweyo.
5. Ukufunxwa kwamanzi
Umswakama okongezayo ngexesha lokucocwa unokulawulwa ngaphezulu kobubanzi, encedisa ukonyusa uzinzo lwamanzi kwisitya sokugqibela. Ezi pellets zifunxa amanzi amaninzi, igcina imilo ixesha elide kwaye ikhokelela ekuphulukaneni nelahleko yezondlo. Inceda iimpawu ze-pellet zobugcisa kunye nempilo yeentlanzi.
6.Ukulungela ukulawulwa koxinano
Kuyenzeka ngokupheleleyo ukuba umntu owabalekisayo avelise ukutya okubhabha, ukutya okusinkcenkceshayo kunye nokuthoba ukutya okucothayo ngokulawulwa koxinano; oko kulungele iintlobo ezahlukeneyo zeentlanzi.
Ulwazi lobuchwephesha boMatshini wokuFudumeza weNtlanzi
Ividiyo yomatshini wokutya iintlanzi